उत्सुक च्याउ पिकर गृष्म को बीच inconspicuous मा सामना अन्तर्गत च्याउ नाम svinushki। च्याउ svinuha पातलो (वा Paxillus involutus) शंकुधारी र अनित्य वन मा, साथै पार्क मा रूपमा, सडक साथ, landfills मा, खुला भुइँमा, र एक कमिला बस्ने घर को बीचमा बढ्छ। यो यसको नाम मानिसहरू बीच मूल लिएको छ बताउँछन्। Svinuhi - मशरूम वृद्धि ठाउँमा को विकल्प मा unpretentious र बेईमान।
मध्य-जुन देखि अक्टोबर - एक लामो समय को लागि फल। यो कहिलेकाहीं मूल बाटो फर्श र चेन र छल्ले सिर्जना गर्ने, ठूलो समूह बढ्छ। बाह्य च्याउ svinuha छोटो खुट्टा मा एक बाक्लो meaty हुड छ। टोपी एक बाङ्गो तल किनाराको एउटा सोली जस्तो। यो 20 सेमी गर्न व्यास पुग्न सक्छ, तर औसत 10-12 सेमी छ। सुरुमा यो समतल छ, तर विकास रूपमा बीचमा एक recess संग टुकी आकारको हुन्छ। एक टोपी छैन यो अक्सर र्याग्ड वा अनियमित छ, राउन्ड आकार सही सधैं छ। रंग - हल्का खैरो देखि गाढा खैरो गर्न। सतह महसुस, सबै च्याउ roughened, मखमल। सतहमा यो विशेष गरी टोकरी को तल, धूलो मा उत्तेजित गर्दछ चाँडै धेरै तंग देखिन्छ, तर।
मशरूम svinuhi (माथि तस्विरमा) एक प्लेट गर्न भन्छिन्। रंग प्लेट - फोहोर-पहेंलो, बायाँ गाढा चिह्न थिचेर गर्दा, भंगुर ड्राई विभाजन चाँडै crumble। खुट्टा शायद9भन्दा बढी सेमी, व्यास बढ्छ - 1.52सेमी को, केन्द्र मा स्थित छ, अक्सर थोडा टोपी को किनारा गर्न सारे। शरीरका पहेलो, त्यसपछि खैरो, अक्सर कीडे प्रभावित को एक खण्ड मा, बाक्लो छ।
Paxillus atromentosus, वा ढुसी svinuha बाक्लो, र मात्र - धेरै कम संभावना अर्को प्रकारको फेला गर्न को शंकुधारी वन रूखहरू स्टम्पहरू मा। यसको edibility किनभने अप्रिय तीतो स्वाद को संदिग्ध छ। सधैं दांतेदार किनारों, अमिल्दो, बिना गंध र धेरै कठिन शरीर संग पक्ष खुट्टा टोपी - र यो अनौठो देखिन्छ। पक्कै, पाक स्वाद को सूची को अन्त मा यो च्याउ।
यो बावजुद च्याउ svinuha धेरै जस्तै पातलो को स्वाद (बाक्लो गर्न विरोध रूपमा)। देखि रूस मा पुरातन समयका खाना प्रयोग यस प्रकारको - उसिनेर, नुनीन, पोलेको। आज सम्म, त्यहाँ च्याउ राम्रो स्वाद, विशेष गरी युवा svinushki छ को रूप मा, edibility बारेमा विवाद हो। तथापि, वैज्ञानिकहरूले toxins र बिष को उपस्थिति तिनीहरूलाई फेला छन्। प्रत्येक व्यक्ति शरीर तीव्र विषाक्तता कसैले एक पटक, यी बिष गर्न प्रतिक्रिया, र कसैले कुनै पनि बिरामी प्रभाव हुन देखिँदैन। Muscarine - ए muscaria मा निहित विष र त्यहाँ svinushek। साथै, अवलोकन रातो रक्त विनाश स्थिर र पटक-पटक प्रयोग अन्तर्गत।
समय बम एक प्रकारको - विशेषज्ञहरु कि svinushki भन्छन्। पनि विभ्रम र मृत्यु - को विषाक्तता पहिलो प्रयास मा भयो भने, थप नतिजा धेरै फरक हुन सक्छ। यसलाई पूर्ण बच्चाहरु को आहार देखि च्याउ हटाउन आवश्यक छ। यसलाई केही बिष र toxins एक गर्मी उपचार संग गायब भने, सीजियम र तामा को रेडियोधर्मी आइसोटपहेर्नुहोस् को संग्रह को च्याउ को मज्जा मा रहने कि ज्ञात छ। कमजोरी, वाकवाकी, चक्कर आना, दुखाइ जिगर मा - विषाक्तता को मुख्य लक्षण। साथै, केही गम्भीर विषाक्तता को दुःखी नतिजा रेकर्ड थिए।
पान्डा - यो एक भालु वा र्याकुन छ? विवरण पांडा
सेन्ट माइकल को बगैचा सेन्ट पीटर्सबर्ग - इतिहास द्वारा घेरिएको एक पार्क
धूर्त पानासोनिक ते-RF31: विशेषताहरु, स्थान, समीक्षा
ड्रीम व्याख्या: केडीई कस्तो देखिन्छ?
बिली विवरण inviz गुडिया र विशेष गरी
"Prezista" (darunavir): मूल्य समकक्षों। सस्ता रूपमा Prezista किन्न?